२. पाकिस्तान फुटबलमाथिको प्रतिबन्ध फिफाले हटायो
काठमाडौ । झरना थापा निर्देशित फिल्म ए मेरो हजुर ४ १ वैशाखबाट हलहरूमा प्रदर्शनमा आउँदैछ । तर, दक्षिण भारतीय फिल्मसंग आफ्नो फिल्म रिलिजको दिन जुधेपछि फिल्म निर्माण टिम यतिबेला चिन्तामा छ । १ वैशाख नै दक्षिण भारतीय फिल्म केजीएफ २ पनि नेपालका हलहरूमा प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
दक्षिण भारतीय फिल्मका कारण बलिउड समेत समस्यामा परेका बेला नेपाली फिल्मको अवस्था झन खराव हुने अनुमान गरिएको छ । विदेशी फिल्मको दबदबाले नेपाली सिनेमाहरू चेपुवामा परेका छन् । यस्तोमा दुई वर्ष पछि फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउन लागेका निर्माण पक्ष तनावमा परेको हो । निर्देशक थापाले विदेशी चलचित्रसँग एक्लै लड्नुपरेको दुखेसो पोखेकी छन् । उनले फेसबुक स्टाटसमा चलचित्रकर्मीहरू यस्तो बेलामा एकसाथ नभएको गुनासो गरेकी छन् ।
ुअहिले हामी विदेशी चलचित्रसँग एक्लै लड्नुपरेको छ । भोलि तपाईंले पनि लड्नुपर्ने नै छ । बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्किएको हेक्का राख्नुहुन मेरो विनम्र अनुरोध छ । चलचित्रकर्मी मित्रहरू, आज हामीलाई झम्टिने चितुवाले भोलि तपाईंलाई बाँकी राख्छ त ? यो तथ्यलाई विचार गर्नुहोला । बाँकी फैसला दर्शकरूपी भगवान्‌को जिम्मामा,ु झरनाले लेखेकी छन् ।
झरनाले कतिपयले निर्धारित मितिबाट फिल्म हट्न लागेको हल्ला चलाइरहेको कुराले दुख लागेको बताइन् । हामीले हामीसँग भएको स्रोत, साधन, बजार र प्रविधिअनुसार पूर्ण इमानदारिताका साथ ए मेरो हजुर(४ निर्माण गरेका छौँ । दर्शकसँग गरेको वाचाप्रति हामी कटिबद्ध छौँ ।
चाहे जस्तोसुकै परिस्थिति किन नआओस्, हामी हामीले रोजेको र तोकेको मैदान छाडेर एकरत्ति पनि पछि हटेका छैनौँ, उनले लेखेकी छन्, यसमा नेपाली चलचित्रको भलो नचाहनेहरू ढुक्क भए हुन्छ । हाम्रो चलचित्र सम्पूर्ण हलहरूमा पुगिसकेको छ । फिल्म ए मेरो हजुर ४ मा अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री सुहाना थापाको मुख्य अभिनय छ ।